Shiinaha warshad fan Fan iyo saarayaasha | Yahuuda
Qalabka fanku waa inuu hubiyo helitaanka oksijiinka wuxuuna ka ciyaaraa doorka gubashada Waxay leedahay door go'aan qaadasho ah oo lagu hagaajinayo wax soo saarka, dhalidda, dhuxusha oo gubanaysa.
11. Nidaamka bixinta hawada
Maalmahan, inta badan nuuradda liinku waxay keliya hawada siiyaan gunta, taas oo aan si siman loo qaybin, waxayna u nugul tahay ifafaalaha gubashada qayb ahaan, soo saaridda xudunta, coking iyo dib u sifeynta. Dabaysha cadaadiska sare leh ee ay soo saarto taageereyaasheena gubista ee gaarka ahi waxay u kacdaa aagga calcining iyada oo loo sii marayo aagga qaboojinta ee salka hoose ee foornada. Aagga qaboojinta ayaa runtii ah aag isweydaarsiga kuleylka. Heerkulka liinku aad ayuu hoos ugu dhacaa marka heer kulka dabiiciga ahi uu kaco lime heerkulkiisu sarreeyo. Ka dib kuleylka iyo isweydaarsiga qabow ka dib, kuleylka waxaa lagu soo celiyaa aagga calcination, lime-ka waxaa lagu qaboojiyaa wax ka hooseeya 80 ℃ si loo buuxiyo shuruudaha heerkulka dambaska.
Faa'iidooyinka qalabka: aagga qaboojinta ee leh giraanta hawada, marka loo eego cadaadiska la dejiyey, mugga hawada iyo nidaamka kormeerka heerkulka si loo hagaajiyo oksijiinta foornada, si loo gaaro saameynta nidaaminta nidaamka calcination, ma aha oo kaliya xalliyaan dhibaatada sinjiga qayb ahaan, coking, turxaanbixinta geesaha, bamgareynta, gubashada dhammaystiran ee arrinta kacsan ee laga sii daayo gaaska qiiqa, si looga dhigo geedi socodka wax soo saarku mid xasiloon oo hagaajiya xasilloonida iyo wax soo saarka wax soo saarka.
Lime foornada hawo bixinta iyo xulashada marawaxadaha
Si kasta oo shidaal loogu daro walxaha shidaalka ama foornada gaaska, waxay u baahan tahay dabayl macquul ah, maxaa yeelay gubashada shidaal kasta waa inay lahaato saddex xaaladood, oo kala ah shidaalka, hawada (oksijiinta), iyo dab furan. Shuruudo la'aan, ma gubaneyso, laakiin qadarka dabaysha ayaa loo xisaabiyaa iyadoo lagu saleynayo baahida oksijiin ee ka mid ah waxyaabaha guban kara shidaalka, ma ahan wax aad u badan ama aad u yar. Haddii hawo saa'id ah loo sii daayo sida gaaska qiiqa, kuleyl badan ayaa jiri doona laga qaaday. Haddii mugga hawadu yar yahay, shidaalku si buuxda uma gubanayo, taas oo keeneysa hoos u dhaca qeybta calcining iyo qashinka tamarta. Kaliya bixinta hawo macquul ah waxay yeelan kartaa saameyn calcin wanaagsan waxayna ku guuleysan kartaa ujeedada keydinta tamarta. guud ahaan waxaa loo xisaabiyaa iyadoo loo raacayo qaaciddada soo socota: (waa laga dhaafay qaaciddada xisaabinta) cadaadiskeeda waa in lagu xisaabiyaa iyadoo loo eegayo iska caabinta kala duwan ee ay sameysay nooc foornada noocyadeeda kala duwan iyo granularity kala duwan. Tiirka / dhererka waxtarka leh (m) qaaciddada si loo xisaabiyo Laakiin cabirka hadhuudhka ee shidaalka ceyriinka sidoo kale wuu ka duwan yahay Sidaa darteed, marawaxadda waa in lagu xushaa iyadoo loo eegayo xisaabinta aragti ahaaneed iyo iyadoo lagu saleynayo nooca foornada gaarka ah iyo waayo-aragnimada wax ku oolka ah ， Way fiicnaan kartaa isticmaal saameyn.
Hore: Golaha Nidaamka Kaydinta
Xiga: Laba Marxalad Lock Air Madax
2. nidaamka gudbinta Suunka gudbiyaha, oo ah qalab guud oo loogu talagalay gaadiidka waara, waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa wax soo saarka warshadaha waana mid ka mid ah qalabka gudbinta guud. Faa'iidada adeegsiga daboolka suunka dhulka hoostiisa si loogu qaado mashiinka suunka ayaa ah inay si weyn u yareyneyso wasakhda wasakhda boodhka iyo buuqa, u hoggaansamayso shuruudaha siyaasadda qaran ee ilaalinta deegaanka, isla markaana ay aad u faa'iido badan tahay in la dhiso muuqaalka shirkaddu oo la fuliyo mas'uuliyadda shirkadda. Liiska dhagaxa nuuradda ahi wuxuu u baahan yahay ...
Qalabka Khadka Kaalsiyam Hydrokside Line, Qalabka Kaalsiyam Hydrokside, Magaca Ganacsiga ee Kaalshiyamka Kaalshiyamka, Kaalshiyamka Kaalshiyamka iyo Kaalshiyamka hydroxide, Sameynta Kaalshiyamka Hydroxide, Sameynta Kaalshiyamka Hydroxide,